Sunday February 09, 2020 - 08:40:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo American ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho cusub oo ka dhacday saldhig ciidamada Mareykanka ay uga suganyihiin bariga wadanka Afghanistan.
Wararka ka imaanaya Afghanistan ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 askari American ah ay dhinteen 6 kalane ay dhaawacmeen kadib markii nin ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda uu toogasho ugeystay ciidamada Americanka ah.
Col. Sonny Leggett oo ah Afhayeenka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku duulay ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in 2 askari laga dilay 6 kalane laga dhaawacay "laba kamid ah ciidamadeena ayaa dhintay lix kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii rasaas toos ah lagu weeraray xilli ay ku sugnaayeen gobolka Nangarhar ee bariga Afghanistan" sidaas waxaa yiri Afhayeenka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan.
Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in goobta weerarku ka dhacay ay aheyd qeybta hoggaanka ciidamada Mareykanka saldhigga ay ku leeyihiin Nangarhar, wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Mareykanka ay toogteen ruuxii weerarka geystay.
Inta badan toogashooyinka ka dhaca gudaha saldhigyada Mareykanka waxaa mas'uuliyadooda sheegata Xarakada Jihaadiga Talibaan iyadoona marmarka qaar ay weerarada nuucaan ah ay geystaan ciidamo Afghaaniyiin ah oo ka qiirooday dhibaatada ay ciidamada Americanka ugeystaan shacabka muslimiinta ah.